English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on November 23, 2012 at 8:54 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၀ိုင်ဆိုတာအနောက်ဥရောပသားတို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့အဖျော်ယမကာတစ်မျိုးပါ။ အစားအသောက်ပွဲတိုင်းမှာ ၀ိုင်မပါမဖြစ်ပါလေ့ရှိသလို အမျိုးအမည်တွေကလည်းများလွန်းလှတော့ ဘာသာရပ်တစ်ခုလိုလေ့လာယူရပါတယ်။ ၀ိုင်ရဲ့အနံ့အသက်၊ အရသာ၊ ဂုဏ်သတ္တိတွေကို အာရုံခံမြီည်းကြည့်ကာ အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းကို Wine tasting လို့ခေါ်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်တဲ့အထိကျွမ်းကျင်သူတွေကို sommelier (သို့မဟုတ်) wine taster လို့ခေါ်ပြီးစားသောက်ဆိုင်တွေမှာဈေးကြီးပေးခန့်ထားကြပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ၀ိုင်အကြောင်းပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
Unit 11 - Talking about wine
Waitress: Would you like to order some wine with your meal?
Customer1: Yes, please. Which is drier, the Riesling or the Sauvignon Blanc?
Waitress: The Sauvignon Blanc is drier than the Riesling. But it isn’t as dry as the Pinot Grigio.
Customer1: Right, I’ll haveaglass of Sauvignon Blanc. Nancy, you prefer something sweeter, don’t you?
Customer2: Yes,aglass of Chardonnay please.
Customer1: Then, we’d likeabottle of red to go with our main course. Which is lighter, the French or
Waitress: Well, they’re both full-bodied wines. I recommend the French. It’s more expensive than the
Chilean but it’s smoother.
Customer2: OK, then let’s have the French.
Waitress: Thank you Madam. Would you like some mineral water?
Customer2: Yes,abottle of sparkling water please.
Which is drier, the Riesling or the Sauvignon Blanc? ဘယ်ဟာကပိုပြင်းလဲ။ Riesling လား the Sauvignon Blanc လား။
Sauvignon Blanc is drier than the Riesling. Sauvignon Blanc က Riesling ထက်ပိုပြင်းပါတယ်။
it isn’t as dry as the Pinot Grigio. Pinot Grigio လောက်တော့မပြင်းပါဘူး။
they’re both full-bodied wines. နှစ်မျိုးစလုံးကတော့အရင့်စားတွေချည်းပါ။
The French Merlot is more expensive than the Chilean.
The French Merlot က the Chilean ထက်ဈေးပိုကြီးပါတယ်။
wine ကို sweet လား dry လားဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကို ၀ိုင်ချက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ သူထဲမှာကျန်နေခဲ့တဲ့ သကြားပမာဏအနည်းအများကိုမူတည်ပြီးသတ်မှတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ ပါဝင်တဲ့အရက်ပမာဏ၊ အချဉ်ဓါတ်စတာတွေကိုလည်းထည့်စဉ်းစားကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် dry ဆိုတာ အချိုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ယေဘုယျမှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ (ဒီမှာတော့ဝိုင်အပြင်းလို့ပဲဘာသာပြန် ပေးထားပါတယ်။ အတိအကျမမှတ်စေလိုပါဘူး။)
၀ိုင်နီမှာလည်း ၀ိုင်ချက်လုပ်ရာစပျစ်သီးအမျိုးအစားရဲ့အရောင်ကြောင့် အနီရောင်ရင့်ရင့်ကနေ အနီဖျော့ဖျော့အထိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို lightness လို့ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ သဘာဝအရောင်ချယ် ပမာဏ tannin ပါဝင်မှုနည်းတာကို light-bodied လို့ခေါ်ပြီး ပါဝင်မှုအများဆုံးဝိုင်ကိုတော့ full-bodied လို့ရည်ညွှန်းတယ်လို့သိရပါတယ်။
become = ဖြစ်လာသည်
district = အရပ်ဒေသ၊ စီရင်စု၊ ခရိုင်
excellent = ထူးကဲသော။ အကောင်းဆုံးဖြစ်သော
fine = အဆင့်မြင့်သော။ အထက်တန်းကျသော။ ကောင်းသော
improve = တိုးတက်သည်
popular = လူကြိုက်များသော၊ ရေပန်းစားသော
produce = ထုတ်လုပ်သည်
recommend = ထောက်ခံသည်။ ညွှန်းသည်။
smooth (wine) = (သောက်ရတာ)ညက်ညောသော
အရာဝတ္ထုများကို -er than, more … than, not …. as … as အသုံးပြု၍နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
-er than ကိုသုံးပြီးအရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် အောက်ပါဥပဒေသလေးများကို မှတ်ထားပါ။
all adjectives with more than one syllable (except some adjectives with two syllables – see2- 1 to2- 4)
The Italian wine is sweeter thanthe New Zealand wine.
The French wine more expensivethan the Chilean.
The New Zealand wine isn’t as dry asthe Portuguese.
1. The restaurant is ...................(busy) tonight than last weekend.
2. The Plaza is ................(close) to the airport than the Grand.
3. A suite is .............. (expensive) thanasingle room.
4. I think the Sauvignon Blanc is ...............(good) than the Riesling.
5. Mineral water is .................(Cheap) than wine.
6. The Chilean Merlot is ................. (not smooth) as the French.
၂။ အောက်ပါတို့ကိုအသုံးပြုပြီး စာပိုဒ်ကို ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ပါ။
Champagne Port France Bordeaux
Italian Spain Frascati
.......................1 is the famous sparkling wine produced east of Paris. St. Emilion is also produced in ....................2 in the ......................3 region. Two ...................4 wines include Chianti fromthe Florence region and .....................5 near Rome ............6 comes from Portugal and sherry from the south of ...................7.
ကဲဒါကတော့ talking about wine နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပိတ် ၀ိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စကားပုံလေးနဲ့ပိတ်လိုက်ရအောင်။
၀ိုင်လိုပဲအိမ်ထောင်ရေးဟာလည်း သက်တမ်းရင့်လာတာနဲ့ပိုကောင်းလာရတယ်။ ဗူးဆို့လေးဖုံးတတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့။
Permalink Reply by Thike Htun on November 24, 2012 at 7:07
Permalink Reply by Ratan Biswas on November 24, 2012 at 10:43
Permalink Reply by padout,layy on November 24, 2012 at 11:40
thank for sharing... thank